बाल्यकालमा १३ चर्चित नेपालि कलाकारहरु कस्ता थिए ? – नेपालि भिडियो ब्लग, पहिलो र एक मात्र
मिस नेपाल १९९७ झरना बज्राचार्य अभिनेत्रि र मोडल हुन । धेरै फिल्ममा अभिनय गरे पनि झरनालाइ सफलता भने हात लागेन । झरनाले हालै मलेशियन नागरिकसंग बिवाह गरेर उतै बसोबास गर्न थालेकि छिन । उनले मेडिटेसन सिकाउने ब्यबसाय पनि शुरु गरेकि छिन । (अरु बाल्यकालको फोटोहरु भिडियोमा)
अभिनेत्रि झरना थापा नेपालि फिल्ममा सफल अभिनेत्रि हुन । उनले अभिनयका साथ साथै केहि सफल चलचित्र पनि निर्माण गरेकि छिन् ।
अभिनेत्रि प्रियंका कार्कि नयाँ पुस्ताकि सफल अभिनेत्रि र सबै भन्दा ब्यस्त अभिनेत्रि हुन । अमेरिकामा अध्ययन गरेर नेपालि फिल्म क्षेत्रमा काम गर्न भनेर फर्केकि प्रियंकाले फिल्म क्षेत्रकैलागि श्रिमानसंग पारपाचुके गरेको पनि दावि गर्छिन । (बाल्यकालको फोटो भिडियोमा)
हास्य कलाकार दिपकराज गिरिले १२ बर्ष भन्दा लामो समयसम्म हालै बन्द भएको “तितोसत्य” हाँस्य टेलीचलचित्र चलाएका थिए । उनले “छ एकान ६” र “वडा नम्बर छ” जस्ता सफल चलचित्र नेपाली चलचित्र उद्योगलाई दिइसकेका छन् । उनि अभिनयसँगै, निर्देशन र निर्माणमा पनि पोख्त छन् ।
निता ढुङ्गाना, नेपालि चलचित्र क्षेत्रकि नाम चलेकि अभिनेत्रि हुन् । किशोरावस्थादेखि नै अभिनयमा लागेकि निता नेपाली चलचित्र उद्योगमा सफल र सुन्दरि नायिकाको रुपमा चिनिन्छन् । उनले अभिनय गरेको चलचित्र “नोटबुक”को गाला रातै बोलको गीतले उनलाई निक्कै चर्चित बनाएको थियो। (बाल्यकालको फोटो भिडियोमा)
निरु खड्का नेपाली हास्य अभिनय क्षेत्रमा चिनिएको नाम हो । चर्चित हाँस्यटेलीचलचित्र मेरिबास्सैमा उनको निर्मलिको भुमिकालाइ धेरै नेपालि दर्शकले मन पराएका थिए । निरुले चेतनामुलक नेपाली टेलिचलचित्र “थोरैभए पुगिसरि”बाट चिनिएकि अभिनेत्रि हुन । उनि चलचित्र, टेलीचलचित्र, मोदलिंग र म्युजिक भिडियोमा पनि सक्रिय छिन । (बाल्यकालको फोटो भिडियोमा)
“चपलि हाइट”कि अभिनेत्रि बिनिता बराललाइ कन्ट्रोभर्सियल अभिनेत्रि मानिन्छ । उनको दोश्रो चलचित्र फ्लप भए पछि अभिनयलाइ छोडेर क्रिषिमा सक्रिय भएकि बिनिता अहिले अमेरिकामा अध्ययनरत छिन । उनको तेस्रो चलचित्र “सुपरस्टार” रिलिज हुने क्रममा छ ।
तेस्तै माथि राखिएको भिडियोमा “जेरि” फिल्म बाट नेपालि सिने क्षेत्रमा प्रवेश गरेकि आना शर्मा, आकर्षक मुस्कानकि धनि मोडल र अभिनेत्रि बर्षा रावत र सानो पर्दामा जम्न सफल सरिता लामिछानेका बाल्यकालका फोटाहरु पनि समावेश गरिएका छन ।
This entry was posted in Artists, People and tagged Binita Baral, childhood photo, Deepak Raj Giri, Jal Shah, Jharana Bajracharya, Jharana Thapa, Manisha Koirala, Neeta Dhungana, Niru Khadka, Priyanka Karki, Rajesh Hamal. Bookmark the permalink.
← बिन्दु परियारले पुर्वपति विरुद्धको मुद्दा जितिन्, रु. ७२ करोड क्षतिपूर्ति पाउने
ऋषि धमलाको पार्टिमा पुर्वप्रधानमन्त्रि, सभामुखदेखि सेनापतिसम्म, बोलाउनु गैरकानुनि? →